I-Fraport Twin Star ifumana ibhaso loMqeshi ongenabuchule
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » I-Fraport Twin Star ifumana ibhaso loMqeshi ongenabuchule
isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Twin Star ye-fraport ifumana i-Award yoMqeshi kwi-Albena Beach
Amawakawaka eendwendwe ezafika kweli hlobo eVarna (VAR) naseBurgas (BOJ) kwizikhululo zeenqwelo moya eBulgaria kuLwandle oluMnyama loLwandle baya kubuliswa yimibala eqaqambileyo kunye nevumba elimnandi lama-5,000 150 eeroses ezisandula ukutyalwa. Le projekthi ikhethekileyo yaseBulgaria Roses Airport yayiyenye yeeprojekhthi ezingaphezulu kwe-400 zophuculo ezaqalwa ngexesha lokuvalwa kweCorona kule ntwasahlobo ngabasebenzi beFraport Twin Star Airport Management AD - inkampani inkampani eqhuba la masango mabini ukuya kwiikhilomitha ezingama-XNUMX. Umda weholide yoNxweme loLwandle oluMnyama.
Ihlobo leentyatyambo lilindele iindwendwe eVarna naseBurgas Airport: isango lokuya kuNxweme loLwandle oluMnyama eBulgaria.
Abasebenzi eFraport bayiguqulile i-COVID-19 yokutshixela kwinto elungileyo ngokugqibezela iiprojekthi ezili-150 zokuphucula.
I-Fraport iqinisekisiwe yi-ACI phantsi kwecandelo leZikhululo zeenqwelo moya eziphilileyo.
Kuthathelwa ingqalelo ukuzibandakanya kwabasebenzi kunye nokuzinikela kwabo, iFraport Twin Star kutsha nje ifumene ibhaso loMqeshi oMangalisayo kwiFederal of Union Trade Unions eBulgaria. Ngokukhethekileyo kulo nyaka, eli bhaso litsha liwonga amanyathelo kaFraport Twin Star athi ancede abasebenzi besikhululo seenqwelomoya kunye neendwendwe ngokufanayo. Esenza iwonga kumsitho obuse-Albena Beach resort kufutshane nase-Varna, u-Ekaterina Yordanova, ongusihlalo we-Federation of Transport Trade Unions wagxininisa: Injongo yeqela elinye - kukudala imeko-bume esempilweni nenomdla kwisikhululo seenqwelomoya. ”
ukusukapokanye Abasebenzi beTwin Star banegalelo elipheleleyo leeyure ezingama-30,000 kwiiprojekthi ezili-150 kwizikhululo zeenqwelo moya zaseVarna naseBurgas.
Ezi projekthi aziphuculanga kuphela ukubonakala kweendawo ezisemhlabeni kunye neecala lomoya, kodwa zikwagcinile iiasethi kwaye zonyusa imeko yomsebenzi kubasebenzi. Umzekelo, iiofisi kunye neendawo zokuphumla zabasebenzi, iindawo zikawonke-wonke kunye nezixhobo zesikhululo seenqwelomoya ziye zahlaziywa. IFraport Twin Star ifuna ukwenza olona hlobo lusebenzayo lokujonga amandla ngenxa yokuhla kwezithuthi okubukhali eYurophu.
Ingqonyela yeFraport Twin Star uFrank Quante uthe: “Zonke iindawo zesikhululo seenqwelomoya d Burgas zilungiselelwe ngeyona ndlela ibalaseleyo- kunye namawaka eeroses ezidumileyo zaseBulgaria - ukwamkela abakhweli kunye neendwendwe eVarna naseBurgas ngexesha labakhenkethi basehlotyeni lowama-2021. Silungele abakhenkethi kwaye simema wonke umntu ukuba achithe ixesha kuLwandle oluMnyama oluhle lwaseBulgaria, nenkcubeko yalo etyebileyo kunye neelwandle ezigqibeleleyo. ”
Iiroses zaseBulgaria zilindele iindwendwe kwisikhululo senqwelomoya saseBurgas
Umphathi omkhulu uQuante ukwagxininisile ukuba izikhululo zeenqwelo moya zeTwin Star zifumene isatifikethi seZempilo esikwiZiko leZikhululo zeZikhululo zeNqwelo moya ze ACI, umbutho womzi mveliso wehlabathi. “Ngaphezulu kwe-60 yeekhrayitheriya zokusebenza ezivavanywe yi-ACI zibonakalisa ezona ndlela sizisebenzisayo kushishino. Oku kuqinisekisa iinzame ezinkulu ezenziwe nguFraport Twin Star ekuphumezeni amanyathelo abanzi okhuseleko kunye nococeko eVarna naseBurgas, ”wongeze watsho uQuante. Amanyathelo okhuselo lwempilo kaTwin Star abandakanya ukucoca okunzulu kunye nokubulala iintsholongwane, ukuvavanywa kwezempilo, ukuhamba kude emzimbeni, imfundo yezempilo yabasebenzi kwisikhululo seenqwelomoya, ukhuseleko lwabakhweli, unxibelelwano olubanzi ngeendlela ze-Intanethi nezingaxhunyiwe kwi-intanethi, indlela yenkonzo yabathengi eyenzelwe wena, ukuhlengahlengiswa kwamaziko, kunye nokwenza iinkqubo zedijithali. Owona msebenzi ubalulekileyo yayikukunyanga amawaka eendawo ezinxibelelana nomgangatho ophakamileyo kwizikhululo zeenqwelo moya zeTwin Star kusetyenziswa ubugcisa bokulwa ne-anti-microbial nanotechnology.
Iindaba ezingakumbi malunga neFraport.